Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja - Ozinina kojakoja any Sina
Ny plywood dia mandrakotra ny plywood birch, ny plywood ary ny poplar plywood, ary mety hiditra ao anaty tontonana ho an'ny rafitra formwork maro, ohatra, rafitra vy rafitra formwork, rafitra formwork lafiny tokana, rafitra formwork beam, rafitra vy props formwork, rafitra scaffolding formwork, sns… Ara-toekarena sy azo ampiharina amin'ny fandrarahana simenitra izany.
LG plywood dia vokatra plywood izay voapetaka amin'ny sarimihetsika impregnated amin'ny resin phenolic tsotra amboarina amin'ny karazana habe sy hateviny mba hahafeno ny fepetra henjana amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
PP hollow formwork dia mampiasa resin'ny injeniera avo lenta avy any ivelany ho fitaovana fototra, manampy additives simika toy ny fanamafisana, fanamafisana, porofo amin'ny toetr'andro, anti-fahanterana, ary afo porofo, sns.
Plywood vita amin'ny plastika
Ny plywood vita amin'ny plastika dia takelaka misy rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny kalitao avo lenta ho an'ny mpampiasa farany izay ilana fitaovana tsara tarehy.Izy io dia fitaovana haingon-trano tsara indrindra ho an'ny filana isan-karazany amin'ny indostrian'ny fitaterana sy ny fanorenana.
Formwork tie rod dia miasa ho mpikambana manan-danja indrindra amin'ny rafitra tie rod, mamehy ny takelaka formwork.Matetika ampiasaina miaraka amin'ny elatra voanjo, waler lovia, rano fijanonana, sns koa dia enbeded amin'ny simenitra ampiasaina ho very ampahany.
Ny Flanged Wing Nut dia misy amin'ny savaivony samihafa.Miaraka amin'ny faladiany lehibe kokoa, mamela enta-mavesatra mivantana amin'ny walings.
Azonao atao ny manindrona na mamaha azy amin'ny alàlan'ny fanerena hexagon, bara vita amin'ny kofehy na tantanana.